Ku cusubtahay Iswiidhan - Örnsköldsviks kommun
- Ku cusubtahay Iswiidhan
Adiga oo ajnabiga ah oo u soo guuray Örnsköldsvik oo la siiyay sharciga degnaanshada waxaa kaalmo iyo talo bixin ka heli qeybta is dhexgalka oo degmada.
Qeybta is dhexgalka oo degmada waxey ku taal Lasarettsgatan 7 B oo Örnsköldsvik. Wuxuu booqosho u furanyahay: tallaado 12:30–15, arbaco iyo khamiis 09:00–11:00 iyo 12:30-15:00. Telefoonka 0660 – 880 74.
Dadka weey waxey haystaan fursad ey ku dhigan karan barashada luqada iswidhishka (sfi) oo kamid waxbarashada dadka weeyn. Waxbarashadaas waxaa ka heli aqoon oo luqada iswiidhishka, mushtamaca iyo nolosha suuqa shaqada. Carruurta jiro da’da dugsiga kaalmo luqadeed waxey ka helaayaan dugsiga.
Warbixin kale oo ku saabsan waxbarashada luqada iswiidhishka waxaa ka heleysaa qeybta warbixinta Dugsiga, waxbarashada.
Haddii aad u baahan tahay caawinaad turjum markaa la soo xiriireysid degmada ama xafis waa xafiska aad la xiriireysid waxa mas’uulka ka ah iney balamiso turjum. Turjumka waxaa qabanaayo sharciga sirta iyo wixii lagu wada hadlay qofkale ma u sheegikaro.
Wada qaadashada nolosha
Goobta is dhexgalka[Mångkulturellt centrum] waa meel la isku la kulmikaro oo dhammaan qofkasto oo doonaayo imaankaro. Meeshaas waad imaan kartaa adiga oo ku cusub Iswiidhan sidaa xiriir ula yeelan kartid dadkale iyo uga qeyb-qaadatid dhaq-dhaqaaqyada kala duwan.
Goobta is dhexgalka waxaa laga helaa ciwaanka Stora torget oo Örnsköldsvik. Telefoonka: 070-191 73 12.